Igwu Pool chlorine, nchekwa, disinfectant - Maochen
Igwu Pool chlorine
Biocides & Ọrịa
Uru maka ego
Anyị na-enye nke kacha mma mma ngwaahịa
Weifang Maochen Chemical Co., Ltd. bụ a otu ụlọ ọrụ, na-elekwasị anya Igwu ọdọ mmiri ọgwụ; Bactericides (Biocides) / nchekwa, Kol ngwaahịa na na. Ụlọ ọrụ na-dị na Weifang, Shandong Province, China. Na ihe karịrị afọ 15 ahụmahụ chemical ụlọ ọrụ, Weifang Maochen Chemical Co., Ltd. bụ otu n'ime Premiya disinfectant suppliers na China. Dị ka a pụrụ ịdabere na-reputable emeputa, anyị na-emepụta na mbupụ niile gburugburu ụwa. Ahịa anyị si Australia, Israel, South- ọwụwa anyanwụ, Mid-n'ebe ọwụwa anyanwụ, EUR, US, Mexico, Chile etc, ihe karịrị 20 mba.
na-ekpo ọkụ ngwaahịa
Trichloroisocyanuric acid 90% mbadamba (TCCA)
Trichloroisocyanuric acid Multi mbadamba (TCCA)
Biocides & nchekwa (CMIT / MIT)
Ka disinfectant maka igwu mmiri, mmiri ọkụ, saunas, spa; Aquaculture, azu ọdọ mmiri; Ụlọ ọrụ mmiri ọgwụgwọ, ndụ na gburugburu ebe obibi na na
Ka disinfectant maka igwu ọdọ mmiri; Ụlọ ọrụ mmiri, mmiri ọṅụṅụ, bleaching, ndụ na gburugburu ebe obibi na na.
Nwere ike n'ọtụtụ ebe dị ka disinfectant, bleaching gị n'ụlọnga ma ọ bụ oxidant dapụtara maka igwu-ọdọ mmiri, mmiri ọṅụṅụ, obi jụrụ ụlọ elu & nsị na unyi mmiri wdg
More karịa 15 afọ ahụmahụ
ịdenye aha ala
Biocides & nchekwa
N'ihi Products ase
Whatspp / ìgwè: 0086 13605417941
Economic Development Mpaghara, Hanting DIST, Weifang, Shandong, China
Copyright - 2010-2019: All Rights echekwabara. Weifang Maochen Chemical Co., Ltd.